သတိပြုရမည့် Pan – ဘာသာရေး အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှု အန္တရာယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » သတိပြုရမည့် Pan – ဘာသာရေး အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှု အန္တရာယ်
သတိပြုရမည့် Pan – ဘာသာရေး အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှု အန္တရာယ်
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 7, 2012 in Opinions & Discussion | 11 comments
ဒီကိစ္စကို ပြောတော့ပြောဂျင်ဗူး၊ သို့သော် မပြောမပြီး မတီးမမြည် မျက်စေ့ထဲ အမြင်မတော် ပြောတော့ ပြောရမှာပဲ။ မြစ်မခသတင်း http://www.myitmakhamediagroup.com/detail.php?newid=1504 ဂျမာအတ်(၁၀)ဦးအသတ်ခံရမှုအတွက် မော်လီအအဖွဲ့ဝင်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ သွားရောက် တွေ့ဆုံရာမှာ “ ဘာသာရေးလုပ်ဖို့ သွားတဲ့လူတွေ၊ အသတ်ခံရတဲ့သူတွေကို မွတ်ဆလင် (ကုလား)လို့ ရေးတယ်၊ အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပါ။ မွတ်ဆလင်လူမျိုးပါ….” အဲလိုတော့ လုပ်နဲ့ဗျာ.. သနားလို့ လက်ပေးကိုင်တာ ဟိုဟာပါရန်ရှာနေဘီ။ မွတ်စလင်လူမျိုးဆိုတာ ရှိမှမရှိဒါ။ ဘာသာနဲ့ လူမျိုး တခြားစီလေ။ လစ်ဘရယ်စစ်စစ်တွေလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တွေးခေါ်ပြုမူဂျဒယ် ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ မှားတယ်ဆိုရင် မွတ်စလင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ လူမျိုးမခွဲဂျား သွေးနှောတဲ့ထုံးစံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိဂျောင်း သက်သေပြ။ လက်တွေ့မှာ ပါရှန်းသွေးပါတဲ့သူနဲ့..အာရပ်နွယ်ဖွားဆိုသူနဲ့ အူရဒူ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးစုံ ခွဲထားသလို ဆွန်နီမွတ်စလင်၊ ရှီးယားမွတ်စလင် ဆိုပြီးတော့လည်း အတိအလင်း ကွဲပြားနေဒါဗဲ မဟုတ်လား။
Pan Pan ဆိုလို့ သွားမပန်ဂျနဲ့ အားလုံးဂွမ်ကုန်မယ်..။
အစဉ်အလာရှိခဲ့ပြီး နိမ့်ကျသွားတဲ့ လူမျိုးမှာ Pan လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်စုစည်းမှု အတွေးအခေါ် ပျံ့နှံ့လွယ်ဒယ်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခဲ့တာ ဆာဘီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ တူရကီတို့မှာ ယခင်ထွန်းကားခဲ့တဲ့ အင်ပါယာတွေကို ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားဂျလို့။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လည်း ထိုနည်းလိပ်ခေါင်း..ဂျာမနီ အီတလီ စပိန်တို့မှာ ဖက်ဆစ်အမျိုးသားရေးစနစ် အောင်မြင်သွားလို့…။ အဲဒီ Pan လှုပ်ရှားမှုများ ဘာသာရေး လောင်းရိပ်မိသွားပီဆိုရင်တော့ ကျားအတောင်ပံ တပ်မိသွားပီ။ အကြမ်းဖက်မှု အားပေးတဲ့ ဘာသာအယူဆိုရင် သေပေဒေါ့..ကုရာနတ္တိ ဆေးမရှိဖြစ်တော့ လူဆိုတာ အတ္တမျိုး.. ဘာသာတရားက မေတ္တာပွားဖို့ စွန့်လွှတ်ဖို့ သီးခံဖို့ပြောရင် မသိဂျင်ယောင်ဆောင်ဂျပီး လိုအပ်ရင်ဒေါ့ မီးလောင်ရာလေပင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာ ဆိုပီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်၊ သူတပါးကို ဖျက်ဆီးဒယ်။ ဒါမှ ဘာသာတရားက ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ် ဝိညာဉ်ရေးရာအရ မြင့်မြတ်သန့်စင် ဖြစ်မှာကိုး။ ဘာသာတရား သွန်သင်ချက်ကို မလိုက်နာနိုင်တော့ရင် မကိုးကွယ်ဘဲနေတာ ပိုအပြစ်ကင်းဒယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလိမ်ဘူး။ မွတ်စလင်တွေ နိုင်ငံတဂါမှာ အစွန်းရောက်လို့ နာမည်ပျက်တာ ဘာကြောင့်လည်း.. ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ ပြန်စစ်ကြည့်ပါ တကယ်စိတ်ရှိလို့ မဟုတ်ဘဲ သူများကို ဆော်ဖို့ ဆင်ခြင်တုံမဲ့ Pan စိတ်ဓါတ် မွေးထားဂျလို့။
အခုလည်း ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ခေါင်းစဉ်တပ်ပီး အုပ်စုတခု အသွင်ပြောင်းတဲ့ ခြေလှမ်းဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်စရာ သိပ်ကောင်းတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျတဲ့ တောရွာတွေမှာ အဲသလို စိတ်ထားမျိုးရှိတယ်။ ကိုယ့်လူတဦး ခံလာရရင် တုတ်ဓါးဆွဲပြီး သွားရိုက်တော့တာပဲ၊ အမှန်အမှား ကျန်တာ နောက်မှရှင်းဒယ်..။ အမှီအခိုကင်း ပြည့်စုံသူဆိုရင် တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးဒယ်၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ဒယ်။ သူများမြောက်ပေးတိုင်း ဂွေးတက်အောင် မကဘူး။ အကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီး သေရမှာမကြောက်လို့ အယ်ကိုင်းဒါး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ လုပ်ကြံမည့်ဘေးဂနေ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထောက်ပြဝေဖန်ဒါ။ ထပ်ပြောလိုက်မယ် သတ္တိရှိရင် စွမ်းတယ်ထင်ရင် မကျေနပ်တဲ့အကောင်တွေ ငါ့အိမ် ဗုံးလာခွဲနိုင်တယ်။ အိမ်လိပ်စာဃ Arcadia CA 91007 U.S.A.
ကျောက်တပ်လျင် တနာရီတဆယ်ရ၏။ (နယူးယောက်ကျောက်တန်းဈေးနှုန်းဖြစ်သည်)
အဲဒီလိပ်စာကို DHL နဲ့ ဆင်ချေးတုံး ဆပ်ပြာ၂တုံး ပို့လိုက်မယ် ။ အဆင်ပြေမလား
အူးလေးကလည်း အူးကြောင်က ဆင်အီးတုန်းနဲ့ မျက်နှာမသစ်ဘူးဗျ
ဒါနဲ့ အူးကြောင်က လူသက်တမ်းကုန်ပြီဆို
မြှောက်ပေးတိုင်း ဂွေးတက်အောင် ကမယ်ဆိုရင်တော့ အုကြောင်ဂျီးလို အုကျမယ်
ဘောပေါက်..ဘောမပေါက်ရင် အုပေါက်သွားမယ်.. (ဥပေါက်ရင် ကြက်ဘဲဈေး သွားရောင်း တစ်လုံး တစ်ရာရမယ်)
အူးဗိုက် ဂွေးတတ်အောင်ကတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဟင်
” အဲလိုတော့ လုပ်နဲ့ဗျာ.. သနားလို့ လက်ပေးကိုင်တာ ဟိုဟာပါရန်ရှာနေဘီ။ မွတ်စလင်လူမျိုးဆိုတာ ရှိမှမရှိဒါ။ ဘာသာနဲ့ လူမျိုး တခြားစီလေ။ ”
ဦးကြောင်ကြီးရေ. ထောက်ခံသဗျို့ ။တကယ်ပြောတာပါ။
ကျနော်လဲ အစွန်းရောက်ဆို မုန်းသဗျာ။အဖက်ကိုမလုပ်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကို ပြုပြင်နေရင်းနဲ့ အမေမောနေမှာကို သားစိုးရိမ်မိပါတယ်၊ မလွယ်ပါဘူးအမေစုရယ်။
U cat, please take care if you use the powder.
အူးကြောင်ကလဲ ရေးမဲ့ရေးတော့ ဘာသာ နဲ့ လူမျိုး တခြားစီဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေး အကျယ်ချဲ့ရေးလိုက်ရောပေါ့။ ဒီကလဲ အခုမှဒါမျိုးမြင်ဖူးတော့ များများစားစားနဲ့ အားရပါးရဖတ်လိုက်ချင်တာ။ ဘယာဂျော် အူးကြောင်
လစ်ဘရယ်စစ်စစ်တွေလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တွေးခေါ်ပြုမူဂျဒယ် ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ မှားတယ်ဆိုရင် မွတ်စလင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ လူမျိုးမခွဲဂျား သွေးနှောတဲ့ထုံးစံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိဂျောင်း သက်သေပြ။
သူတို့ဟာသူတို့တောင် ဇာတ်ရှုပ်နေတာ ဦးကြောင်ကဘာတွေကြည့်ချင်နေတာဒုံး
ဦးကြောင်ကြီးရေ မှန်လွန်း၊ ကောင်းလွန်းတဲ့ပိုစ့်လေးမို့ လက်မထောင်ပြီး အားပေးသွားပါတယ်ဗျို့။